Health | Posted on Aug 30, 2019 by Yin Moe Shinn
နေ့ စဉ်ဘဝတွေကနေခဏရုန်းထွက်ပြီးစိတ်အပန်းဖြေမယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုနေရာတွေကအဆင်ပြေဆုံးလဲ ?
လာမယ့်ပိတ်ရက်တွေကိုအကျိုးရှိရှိအသုံးချဖို့ခရီးသွားကြရအောင်။ နေ့စဉ်အလုပ်တွေကြောင့်လူတိုင်းစိတ်ရောလူရောပင်ပန်းနေကြမှာအသေအချာပါ။ အဲဒီထဲမှာသေချာတာတစ်ခုကတော့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပင်ပန်းမှုပါ။ ဟိုးအရင်အခြေအနေတွေထက်ပိုပြီးတိုးတက်လာလေလေ ပိုပြီးပင်ပန်းလာလေလေဖြစ်နေတဲ့လူသားတွေအနေနဲ့ နေ့စဉ်ကျင်လည်ရတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကနေခဏတာရုန်းထွက်ဖို့ လိုပါတယ်။အဲဒီဘဝအမောတွေကို ဖြေဖျောက်ပေးနိုင်မယ့်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းကတော့
ခရီးသွားခြင်းဘဲဖြစ်ပါတယ်။ စိတ်ရောကိုယ်ပါကျန်းမာစေမယ့်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းအဖြစ်ရှာဖွေတွေ့ရှိထားတဲ့ခရီးသွားခြင်းကအမှန်တကယ်သင့်ကိုပ်ိုပြီးကျန်းမာစေမှာလား ? အမှန်တကယ်ဘဲသင့်မွန်းကျပ်မှုတွေကိုလျော့ကျစေမှာလား ? ဒီမေးခွန်းတွေရဲ့ အဖြေကိုကိုယ်တိုင်ရှာဖွေကြည့်ဖို့ တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်။ဒီတော့လာမယ့်ပိတ်ရက်ရှည်လေးတွေကိုအကျိုးရှိရှိအသုံးချရာရောက်သလိုမွန်းကျပ်နေတဲ့သင့်စိတ်ကျန်းမာစေဖို့ ရယ်အတွက်ခရီးသွားခြင်းဆိုတဲ့ဆေးကိုရွေးချယ်ကြည့်ရအောင်နာ်။ ရောဂါဝေဒနာခံစားနေရသူအချို့အနေနဲ့ခရီးသွားခြင်းကရောဂါတစ်ဝက်သက်သာစေတယ်လို့ ရှာဖွေတွေ့ ရှိချက်တွေအရသိရပါတယ်။ ခရီးထွက်ခြင်းကစိတ်ဖိစီးမှုကိုလျော့ကျစေတဲ့အပြင်အသစ်သစ်သောညဏ်ရည်ကွန့် မြူးမှုကိုလည်းဖြစ်စေပါတယ်။
အကြံညဏ်ကောင်းတွေကိုထွက်စေတဲ့အတွက်သင့်အတွက်ခရီးသွားခြင်းကကြီးမားလေးနက်တဲ့သင့်အတွေးအခေါ်တွေအတွက်ကောင်းကောင်းအထောက်အကူဖြစ်စေမှာပါ။ စိတ်ပျော်ရွှင်ဖို့ ရည်ရွယ်တာမို့ စိတ်အနှောက်အယှက်ဖြစ်စေမယ့်ခရီးမျိုးကိုတော့ရှောင်ကျဉ်ရပါမယ်။ ခက်ခက်ခဲခဲ adventure ဆန်ဆန်ခရီးတွေကတစ်ချို့ လူတွေအတွက်စိတ်ခွန်အားရစေမှာမှန်ပေမယ့်ဒါကိုမရူးသွပ်သူတွေအတွက်ကတော့ပင်ပန်းစေမယ့်အပြင်စိတ်အပန်းဖြေရာမရောက်ဘဲပိုပင်စေမှာပါ။
ဒါကြောင့်ခရီးထွက်ဖို့ နေရာရွေးချယ်မှုကမှန်ကန်နေဖို့လိုပါတယ်။ ရှုခင်းလှလှလေးတွေ ၊ ပင်လယ် ၊ လေ ၊ တောင်တန်းစတဲ့နေရာတွေကသာသင့်ရဲ့ မကျန်းမာတဲ့စိတ်ကိုအမှန်တကယ်ကုစားပေးနိုင်မှာမို့ ဒီလို နေရာမျိုးကိုရွေးချယ်သင့်ပါတယ်။ ဘာကြောင့်လည်း ? နေ့ စဉ်တွေ့ မြင်နေကျရှုခင်းတွေ မြင်ကွင်းတွေကနေခဏရှုန်းထွက်ပြီးအသစ်သစ်သောရှုခင်းတွေကိုခံစားကြည့်စေချင်ပါတယ်။ အဲဒီအရာကသင့်စိတ်ကိုပိုပြီးလန်းဆန်းကျန်းမာစေတဲ့အ့ပြင်အဲဒီအခ်ျိန်တွေကထိုက်တန်တယ်လို့ ခံစားရမှာပါ။ လုံးဝကိုမတူညီတဲ့လေထုကသင့်ကိုစိတ်ကျေနပ်မှုအပြည့်အဝပေးမှာအသေအချာပါ။
ကျယ်ပြောလှတဲ့ပင်လယ်ကြီးကတော့မျက်စိတစ်ဆုံးရေပြင်ကျယ်ကြောင့်သင့်မွန်းကျပ်မှုတွေကိုပျေပျောက်စေမှာပါ။ တောင်တန်းတွေကတော့လွတ်လပ်မှုရဲ့ အရသာကိုပေးစွမ်းနိုင်မှာအသေအချာပါ။
မတူညီတဲ့နေရာဒေသရဲ့ မတူညီတဲ့မြင်ကွင်းတွေအပြင် မတူညီတဲ့ရိုးရာယဉ်ကျေးမှုအချို့ ကိုလည်းရှာဖွေနိုင်မှာမို့ ညီးညူနေတဲ့သင့်စိတ်တွေလန်းဆန်းတက်ကြွစေမယ့်အပြင်အတွေးအခေါ်ကောင်းတွေပါရစေမှာအမှန်ပါ။ ဒါကြောင့်သင့်ရဲ့ စိတ်မပျော်ရွှင်မှုတွေကိုဖယ်ရှားဖို့ လာမယ့်အားလပ်ရက်ရှည်မှာနေရာကောင်းလေးတွေကိုသွားရောက်လည်ပတ်ခြင်းနဲ့ စိတ်ကျန်းမာပြီးပျော်ရွှင်နိုင်ကြပါစေနော်။